Hopitaly CHU Anosiala Hiverina amin’ny laonina 7 volana aty aoriana
Ny zoma 4 septembrateo dia niroso tamin'ny fanadiovana faobe ny hopitaly ireo Mpiaramiasa eto amin'ny CHU Anosiala. Nofaranana tamin'ny firahamisakafo izany.
Tontolon’ny fahasalamana Efa misy eto ny fitsaboana ampitain-davitra
Fomba fitsaboana vaovao nipoitra nandritra izao fiparitahan’ny valan’aretina Covid 19 eto amintsika izao ny fitsaboana hampitain-davitra ho fiarovana ny fahasalaman’ny isam-batan’olona sy tsy hisian’ny fifampikasohana be loatra raha firenena 15 no efa mampihatra azy maneran-tany.
Fandorana ny fako ara-medikaly Hanome fitaovana harifomba ny ONUDI
Nihaona tamin’ny solotenan’ny ONUDI Madagascar Ramatoa Vola Rakotondrazafy Andriatahina ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis ny harivan’ny omaly 08 septambra 2020.
Zaza manana toe-batana diabetika 3 tapitrisa isan-taona ny fitsaboana
Mafy ny mahazo ireo Ray aman-dReny manan-janaka manana toe-batana diabetika.
Hopitaly HJRA Nanome ra maimaimpoana ireo mpino Silamo
Mbola tsy miverina amin’ny laoniny hatreto ny isan’ireo mpanome ra tonga manatona an-tsitrapo etsy amin’ny foibe nasionaly misahana ny famindrana ra etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
Mpitsabo Malagasy Mahay ary manana ny maha izy azy
Nijoro vavolombelona niresaka ny zavatra niainany tamin’izy narary mafy nanao
Hopitaly HJRA Notsenaina tamin-kafaliana Pr Ahmad
Niverina nandray ny andraikiny amin’ny maha-pitsabo azy ny Pr Ahmad Ahmad, izay Minisitry ny fahasalamana teo aloha.
Tsy inona izany fa ny Evokine, izay nivoaka tamin’io taona io, sy ny Vaseline Niaouli, nivoaka ny taona 1997. Araka ny fanazavan’ny talen’ny CNARP, ny Dr Riana Rakotosaona, dia mahatsabo ireo soritraretina toy ny mahazo ny orona, ny tenda, ny tratra sy ny hafa ireo fanafody ireo. Tsy mbola voaporofo kosa anefa fa fanafodin’ny COVID-19 ireo, raha ny fanazavana hatrany. Na izany aza anefa dia isan’ireo fanafody efa namatsiana ny fitsaboana ireo mararin’ity aretina ity ireo nanomboka ny alatsinainy teo. Mbola tsy manana fikarohana isika, raha ny mikasika ny fanafody fanefitry ny Coronavirus saingy efa misy tondrozotra iaraha-manao kosa mikasika izany. manan-karena amin’ny lafiny zava-maniry i Madagasikara, hoy izy, fa eo amin’ny fitaovam-pikarohana no tsy maharaka. Isan’izany, ohatra, ny tsy fananana ny sosona na “souche” an’ilay otrik’aretina. Mila zava-maniry sy biby koa anaovana ny fanandramana, raha ny fanazavany, vao tokony atao amin’ny olona io fanandramana io. Tsy mitombona, raha ny fanazavan’ity mpitsabo ity, ny fidirana avy hatrany amin’ny fanaovam-bakisiny olona raha tsy mandalo amin’izay dingana izay. Na ireo firenen-dehibe aza, hoy izy, mbola maro no tsy manana fitaovana hikarohana ny fanefitry ny Coronavirus.